Muslimad Biljam ah oo daaciyad Islaami ah noqotay | HimiloNetwork
Muslimad Biljam ah oo daaciyad Islaami ah noqotay
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka September 9, 2015	0 252 Views
Brussels – Dhalinyar Muslimad Biljam ah ayaa ka caawisay 1000 qofood inay Islaamka aqbalaan kadib kolkii ay gurigeeda uga yeeshay kob-dacweed gaalada loogu yeero Islaamka kuwaas oo doonaya inay wax badan ka bartaan diinta.
Saameynta ay ku yeesheen asxaabteeda Muslimiinta ah iyo raad-raacii ay diinta ku baadi goobaysay ayaa Veronique Cools ka dhigtay inay Islaamka qaadato xilli hore oo nolosheeda ah.
Wax-yar kadib, waxay go’aansatay inay gurigeeda ka yeesho goob dacwada Islaamka loogu baaqo dadyowga aan Muslimka ahayn ee ku nool Biljamka.
Xarunta dacwada ayaa u shaqeysa sidii ay caadiyanba uga caawin lahayd gaalada ku nool Biljamka inay kasoo dhex-jibaaxaan caadifadaha iyo aragtiyada sirgaxan ee ay ka qabaan diinta Islaamka.
“Caadifadaha iyo fiirooyinka gurracan waxay ku dhashaan faham la’aan qoto dheer oo laga maleeyo diinteenna Islaamka,” ayay tiri iyada oo u darbaneyd soo dhaweynta dadyow raba inay xarunteeda soo booqdaan si ay waaya’aragnimadooda ku saabsan Islaamka ula wadaagaan.
“Muslim ahaan, waxaynu u baahannahay inaynu in-badan bulshooyinka u qayaxno shaqsiyadeenna.”
Kadib 8-sano oo dacallo-fidasho ah, xaruntu waxay hadda leedahay wax ka badan 1000 xubnood—kuwaas oo badigood ah haween Biljiyaan.
Xaruntu waxay sidoo kale u furan tahay gedigood Muslimiinta reer Biljam ee xiisaynaya kororsiga tacliineed ee diintooda.
Muslimiinta Biljam ayaa tiro isasoo taraysa ku yeeshay dad-weynaha Biljamka. Muslimiintan ayaa badigood asal ahaan kasoo kala jeeda Morooko iyo Turkiga. Waxaa kale oo jira Muslimiin kale oo ka kala yimid Pakistan, Bangaladesh, Somalia iyo kuwo badan. Halka wax ku dhow 500 oo Masaajidna ay ku yaalliin dal-weynaha Biljamka.
Previous: Burcad-badeed: Boob lagu xalaashaday Badaheenna!!
Next: Muslimiinta Jejniya oo ba’ iyo baadi u dhaxeeya
Lamaane si halis leh iskugu dayay fal lala yaabay
Ma gaboobo Caashaqu: lamaanuhu qalbiyaday iska arkaan maya indhaha–nala ogow xaqiiqada oo aqriso sheekadan